के हो उच्च रक्तचाप ? कसरी सन्तुलनमा राख्ने ? - Jagaran Post
के हो उच्च रक्तचाप ? कसरी सन्तुलनमा राख्ने ?
जागरणपोस्ट २७ जेष्ठ २०७८, बिहीबार १०:१४
काठमाण्डौ : मुटुबाट रक्तसञ्चार हुने बेलामा रक्तनलीको भित्तामा पर्ने दबाबलाई रक्तचाप भनिन्छ । रक्तचापलाई ‘मिलिमिटर अफ मर्करी’मा नापिन्छ । माथिको रक्तचापलाई ‘सिस्टोलिक’ र तलको रक्तचापलाई ‘डायस्टोलिक’ भनिन्छ ।
सामान्य रक्तचाप १२०/८० भन्दा कम हुनपर्छ । उच्च रक्तचाप भन्नाले माथिको १४० वा सो भन्दा बढी र तलको ९० वा सो भन्दा बढी भएको अवस्थालाई भनिन्छ । माथिको १२० देखि १३९ वा तलको ८० देखि ८९ सम्मको रक्तचापलाई ‘प्रि–हाइपरटेन्सन’ भनिन्छ । यो उच्च रक्तचाप हुनु भन्दा अगाडिको अवस्था हो ।
‘प्रि–हाइपरटेन्सन’ अवस्थामा रहेको व्यक्तिलाई सामान्य रक्तचाप भएको व्यक्ति भन्दा उच्च रक्तचाप हुने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसैले यस अवस्थामा जीवनशैलीमा आवश्यक परिवर्तन गरेर भविष्यमा उच्च रक्तचाप हुनबाट आफूलाई बचाउन सकिन्छ । सामान्य रुपले आफ्नो दैनिक कामकाज गर्नसक्ने व्यक्तिको रक्तचाप कम हुनु राम्रो मानिन्छ । रक्तचाप जति कम छ, भविष्यमा उच्च रक्तचाप हुने सम्भावना त्यति नै कम हुन्छ ।
लो ब्लड प्रेशर भएका मानिसलाई केही बेर सुतेर वा बसेर अचानक उभिदा टाउको हलुको हुने वा रिंगटा लाग्ने हुनसक्छ । यो समस्या मधुमेह रोगी र रक्तचापको औषधी खाइरहेको व्यक्ति तथा वृृद्धहरुमा यो समस्या बढी देखिन्छ । यस्तो भएमा औषधि वा यसको मात्रा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
रक्तचाप नियन्त्रण गर्न के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?
डा. ओममूर्ति अनिल, मुटुरोग विशेषज्ञ, ग्राण्डी अस्पताल
हेमोग्लोबिन कम भएपछि नेता खनाललाई दिल्ली लगिंदै
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई सय थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सहयोग
पाल्पामा थप एक जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु
अपरिचित समूहले ग¥यो डाक्टरमाथि हातपात, ३ जना पक्राउ
कोभिड नेपाल : पहिलो लहरभन्दा दोस्रो लहरमा दुई
एउटै महिलाले एकैसाथ १० बच्चा जन्माएपछि….
पछिल्लो २४ घण्टामा ५ हजारबढि संक्रमणमुक्त, ८१ जनाको
औषधि विभागमा दर्ता नभई बजारमा पुगेको कोरोनिल किटको
कोरोना कहरको बिचमा हन्ताभाइरसको पहिलो केस अमेरिकामा पुष्टि
१.थप क्षति हुन नदिन समन्वयात्मक ढंगले कार्य गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
२.दोर्दी खोलाले हिलेबजारका १४ घर बगायो, ५० घर उच्च जोखिममा
३.भारतमा दैनिक सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनप्रति दिन घट्दो
४.बाढी-पहिरोले देशका विभिन्न स्थानमा पुर्याएको क्षति तस्बिरमा हेर्नुहोस्
५.सर्वोच्चको आफ्नै आदेश परिवर्तन, निषेधाज्ञामा कर उठाउन पाउने
६.६५ किलो गाँजासहित ट्रक चालक पक्राउ
७.संसदभित्रै गाली–गलौज र हानाहान, भिडियो भयो भाइरल
८.हेमोग्लोबिन कम भएपछि नेता खनाललाई दिल्ली लगिंदै
९.इजरायद्वारा गाजा क्षेत्रमा हवाई आक्रमण
१०.नारायणी नदीको सतह इतिहासकै उच्च विन्दुमा